Umlingisi unephupho ngentsha yangakubo - Ilanga News
Home Izindaba Umlingisi unephupho ngentsha yangakubo
Uhlose ukuyifundisa ngamathuba asemkhakheni wezokulingisa
UBhekisizwe Mahlawe (30), uthathwe elingisa uCalvin Gumede emdlalwe-ni iDurban Gen enoNombulelo Mhlongo olingisa uSne kulo mdlalo.
UHLOSE ukuhlela izigcawu zokucobelela intsha yangakubo eMzimkhulu ayifundise ngamathuba ahlukene asemkhakheni wezokulingisa umlingisi owafika kanzima esiqongweni kulo mkhakha.
UBhekisizwe Mahlawe (30), udlala indawo kaCalvin Gumede emdlalweni owuchungechunge, iDurban Gen edlala ku-e.tv ngo-18h30 ngoMsombuluko kaya kuLwesihlanu.
Uthi wayezimisele ngokuba ngumlingisi esesesikoleni njengoba wathi eqeda umatikuletsheni wenza konke okusemandleni ukuthi enze izifundo ezizomenza akwazi ukungena kulo mkhakha kodwa kwangalunga.
“Ngaqeda umatikuletsheni ngo-2009 kodwa ngangakwazi kwenza lutho ngonyaka olandela lowo ngoba beyingekho imali yokuthi ngingaqhubeka nemfundo ephakeme.
“Ngaqala ngadayisa izinto ezahlukene okubalwa kuzona ne-airtime. Lokhu ngangikwenzela ukuthi ngiqongelele imali yikhona ngizokwazi ukuyokwenza izifundo ze-drama kodwa umfowethu nodadewethu okuyibo ababengikhulisa, babefuna ngifundele ubuthishela,” kusho yena.
Uthi ngo-2019 wathwala izikhwama zakhe wafudukela eThekwini eyokwenza izifundo zobuthishela e-Unisa, eno-R6 000 ephaketheni ayewongile.
“Ngafike ngazama indawo yokuhlala ngabhalisa e-Unisa, ngabona ukuthi kayikho le mali ebenginayo ephaketheni, kumele ngibe nenye indlela yokuziphilisa,”esho.
Uthi wathola umsebenzi wokuba nguweta kwelinye lamahhotela amakhulukazi eThekwini, okwathi esenza lowo msebenzi, wezwa ukuthi kunenhlolokhono okufunwa kuyo abalingisi abazokwenza imidlalo efundisayo (Industrial theatre), ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba yeFifa ka-2010 eyayise-Ningizimu Afrika.
“Lapho ngahlangana noThabo Mnguni (uBra Steve wodumo kwiFamily Bonds) nabanye abalingisi abebehamba phambili kulolu hlelo. Kwathi uma seluphela ngabona ukuthi ngempela ngifuna ukuba kulo mkhakha. Ngase nginabo nabantu abambalwa engangibazi. Ngalibangisa eGoli ngiyozama ukungena emkhakheni wokulingisa,” kusho yena.
Uthi ukuhamba kwakhe eThekwini aze ayofika eGoli nakho kwaba nezingqinamba. Wafika eGoli waswela indawo yokuhlala.
Wagcina ethola ithuba lokuba ngumlingisi othule (extra) emidlalweni ehlukene, kodwa imali yayincane kakhulu. Uthi wagcina etholile ukuthi kubalulekile ukuba ne-agent, okwathi esenayo zaqala izinto zakhanya. UBhekisizwe useke wadlala kwi-eKasi: Our Stories edlala indawo kaDaniel, wadlala indawo kaTebza kwiGenerations, ekaPipiliza kwi-Isidingo, ekaJohny Boy kwi-Isithembiso, Post-Man kwiGold Diggers, ukubala imidlalo embalwa.
Njengoba edlala indawo kanesi wesilisa kwiDurban Gen, uthi akaqali ukudlala le ndawo, wake wayidlala kwiRythm City isizini yokuqala. Uthi kuningi kakhulu okwehlukile phakathi kwakhe noCalvin oyindoda enenkani nethanda kuhlale kuqophiswana.
“Mina ngingumuntu ophansi, ozaziyo ukuthi uphokophelele kuphi nempilo,” kusho yena.
Ngaphandle kokulingisa, uthi usesungule inkampani enza ngaphansi kwayo izigcawu ezahlukene.
“Inhloso yami wukwenza izigcawu ngakithi eMzimkulu ngifundise intsha ngamathuba ahlukene akhona kulo mkhakha.”
Uthi yize izintokazi zizibika kuyena, kodwa inhliziyo yakhe isithathwe ngomunye wesifazane.
Previous articleKushone umbhishobhi
Next articleUmgadli weChiefs uveza ubuhlungu ngezakhe